Tag: akpatiaka | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 4, 2011 Wednesday, November 9, 2011 Douglas Karr
Anọ m ọdụ n'ụlọ ntu Automattic na Blog World Expo (ike na-agwụ ike) ma soro ndị otu WordPress nwee mkparịta ụka dị ukwuu gbasara ọtụtụ ọrụ anyị rụrụ na ya yana ịtụle mgbanwe na nsogbu anyị na ndị ahịa anyị na-arụ . Otu n'ime nchegbu ndị ahụ bụ nchekwa na nkwado ndabere. Ọ bụ ihe ijuanya na anọ m na WordPress oge ruo oge ụfọdụ, mana m ka na-anụ maka mmemme na ngwa ndị anọla kemgbe ọtụtụ afọ
Ndo maka ngwụcha ọsọ na nke a! Anyị zigara ndepụta nke ntinye na Ade na ntinye ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ enweghị njikọ metụtara (iji ọrụ RAND na Excel wee dezie kọlụm ahụ). Mgbe ahụ, anyị mere ka Hannes họrọ nọmba na-enweghị usoro n'ime ntinye 108 ka Hannes ghara ịma onye mmeri ga-abụ. Onye mmeri nke ego $ 1,000 bụ Noa na wpstar.com! Iji kpuchie ụgwọ azụmahịa Paypal, m n'ezie